Mudane Cadaani Hirmooga oo ka qeyb galay shirsanadeedkii jaaliyada Ogaadeenya ee Switzerland
Shir sanadeedkii jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya ee Switzerland ayaa shalay 13.12.08 lagu qabtay hoolka shirarka ee hodheelka NH ee ku yaala magaalada Fribourg ee cariga Switzerland. Kulankan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa ka soo qeeyb galey dhamaan xubnaha jaaliyada Ogaadeenya ee wadankan Switzerland iyo shacbiweynaha Soomaaliyeed ee xaqa taageera.
Shirkan oo uu marti ku ahaa gudoomiye ku xigeenka 2aad (GKX 2aad) ee Jabhada Wadaniga Xoreeynta Ogaadeenta (JWXO) mudane Cadaani Hiirmooge ayaa ugu horeeyntii lagu furay aayado Quraanka Kariimka ah, ka dibna loo istaagay dhageeysiga heesta astaanta calanka. Isu imaatin oo aay daadihiniyeen gudoomiyaha jaaliyada Ogaadeenya ee Switzerland Mudane Axmed Gurxan iyo u qaabilsanaha jaaliyada ee xiriirka dadweynaha Mudane Xasan Cabdi Yuusuf ayaa waxa sidoo kale xaadir ku ahaa fanaanka Soomaaliyeed Mudane Cabdoow Muuri.
Mudane Gurxan oo hadal gaaban jeediyay ayaa xusay in jaaliyada Swiss tahay mid tiro yar hase yeeshee tayo leh isagoo taa ahaanshaheeda ku micneeyay in jaaliyadu kasbatay walaalaheena Soomaaliyeed ee wadankan ku nool is la markaana uga mahad celiyay taageeradooda joogtada ah ee dhinac walbe leh. Soo bandhigid waxqabadkii jaaliyada ee sanadkan 2008 iyo qorshe sanadeedka jaaliyada ee sanadka soo socda ee 2009 ka dib ayaa cod baahiyaha lagu soo dhaweeyay Mudane Cadaani Hiirmooge GKX 2aad ee JWXO.
GKX 2aad ee JWXO ayaa soo bandhigay qudbad cajiib ah dhinac walbana taabaneeysay oo waqti dheer socotay toos oo uusan waxba kaga tagin hadii eey ahaan lahayd xag dhaqan-dhaqaale, siyaasad, mid ciidan iyo gaboodfalka gumeeysiga uu ku hayo shacbiga xaq doonka ah ee Ogaadeenya. Mudane Cadaani wuxuu carabka ku adkeeyay in dhibaatada tikreegu ka wadaan wadankii tahay mid aanay waligeed horay u soo marin shacbiga isagoo xusay in inkabadan 97 dagmo ciidamada gumeeysigu dhulka la simeen oo aay u dheer tahay dilka, kufsiga, dhaca, cunaqabateenyta iyo in gumeeysigu dago goobo dagaalna ka sameeysto ceelasha iyo ilaha biyaha, is kuna dayeen in afar goobood oo cayiman isugu geeyaay shacbiga iyo xoolahoodaba. Inkastoo ciidamada xoreeynta Ogaadeenya (CXO) fashiliyeen damicii gumeeysiga shacbiga dhib aad u weeyn ayeey arintan u geeysatay ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Mudane Hiirmooge wuxuu sheegay in gumeysigu niyad jabay taag iyo tabar toona uusan u heli karin in uu dagaal kula sii jiro umad xaqeeda raadineeysa is la markaana la timid xoog ciidan oo tayo leh oo aay u dheer tahay midnimo mintid isku tashi iyo aragti dheeri, godkiisii ayeey biyo ugu galeen, marka aay maqlaan guuxa takbiirta JWXO rucbi iyo argagax ayeey qaadaan dhabarkana jeediyaan isagoo intaa sii raaciyay in Alle fadligii aanay dhicin goob la isaga horyimaado oo uusan ciidankanagu ku gacan sareeyn.
Ma aha kaliya in aan gumeeysiga kaga guuleeysanay dagaalka milatari ee waxaan sidoo kale kaga guuleeysanay saxaafada caalamka, in aduunweynaha u soo bandhigo wajiga dhabta ah ee itoobiya iyo xasuuqa aan isagoo kale la arag ee aay ka wadaan wadankii. Golayaasha dunida ee aay wax ka go’aana waan kaga guuleeysanay ayuu carabka ku adkeeyay Mudane Cadaani hiirmooge isagoo intaa sii raaciyay in itoobiya maanta ceeymo leedahay dana ugu jirto in Ogaadeenya xaqeeda siiyaan ka hor inta aanay JWXO sabab u noqon kala taga itoobiya. GKX 2aad mar uu ka hadlayay gaboodfalka gumeeysiga wuxuu xusay in dilka, kufsiga, dhaca. Xariga iyo nolol duuga lagu hayo umada Soomaalida Ogaadeenya aayan ahayn mid xisaab ka danbeeyn, sidaa daraadeed hayaan diiwaan galiyeena magacii, goobtii, waqtigii iyo cidii qadoobfalka geeysatay. Waxaan ku guda jirnaa sidii maxkamada aduunka ee danbiyada dagaalka aanu u horkeeni lahayn 156 sarkaal oo 15 ka mid ah aanu ku dilnay dagaalikii Caado ka dhacay oo uu ka mid ahaa sarkaalkii gumeeysiga u fadhiyay OAUda.
Mudane Cadaani wuxuu khudbadiisa ku soo gabagabeeyay isagoo sheegay in dhawaan JWXO gudo gali doonto wajigii ugu danbeeyay ee xoreeynta Eebe idankiina la filayo in gumeeysiga gabi ahaanba lagaga saaro dhulka Ogaadeenya halkaa oo la rajeeynayo in uu ku soo afjarmo dhibka itoobiya ku heeyso shacbiga Soomaaliyeed oo idil. Mudane Hiirmooge inta uusan qudbadiisa guda galin wuxuu horkacay daqiiqad xusuus ah oo loo sameeyay Allana loo baryay in uu aqbalo shuhadada Soomaaliyeed ee u shahiiday is ka caabinta gumeeysiga gaamuray ee itoobiya ee Ogaadeenya iyo Soomaaliyaba.
La xiriir: abdimoh@hotmail.com